The first online lottery net in Myanmar, Buy Myanmar Lottery Online
ထီဖွင့်ရန် ၁၅ ရက်သာလိုပါတော့သည်။
ထီထိုးရန် ပထမဦးစွာ မိမိ၏နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် အကောင့်သစ်ဖွင့်ရပါမည်။ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖွင့်ပြီးနောက် မိတ်ဆွေ၏ဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းနှင့် ဝယ်ယူထား သောထီလက်မှတ်များ၏ ပွိုင့်များရရှိပါမည်။ တခြား Promotion များလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ Guest User အနေဖြင့်လည်းဝင်ရောက်ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
အကောင့်ဖွင့်ပြီးနောက် မိတ်ဆွေဝယ်ယူလိုသောထီလက်မှတ်များအား စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ဝယ်ယူလိုသော ထီလက်မှတ်များအား ထီခြင်းတောင်းဖြင့်လည်း စနစ်တကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေရွေးချယ်ထားသော ထီလက်မှတ်များ မှာယူပြီးနောက် ထီလက်မှတ်များလက်ခံရယူရန် မိတ်ဆွေ ၏တည်နေရာအား အတည်တကျထည့်သွင်းပေးရပါမည်။
မိတ်ဆွေ၏ထီလက်မှတ်အရေအတွက်နှင့် တည်နေရာ မှန်ကန်ပြီးလျင် အော်ဒါအတည်ပြုကိုနှိပ်၍ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပါမည်။
မိတ်ဆွေဝယ်ယူထားသော ထီလက်မှတ်များအား အိမ်တိုင်ရာရောက်လာပို့ပါမည်။ ထို့ကြောင့် လာပို့ချိန်တွင်ထီလက်မှတ်၏ တန်ဖိုးအားပေးချေရပါမည်။
ထီလက်မှတ်များ လက်ခံရရှိပြီးနောက် ပွိုင့်များရရှိပါမည်။
Building (14) 4th. floor, MICT Park, Universities' Hlaing Campus (0.50 mi) Yangon 11051
၀၉ ၄၀၁၀ ၁၇၅၀၀
အချက်အလက်မူဝါဒ နှင့် စည်းကမ်းချက်များ
၁. လူကြီးမင်း၏နာမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အား တင်သွင်းပြီးပြီဆိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များအားလိုက်နာရန်သဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါမည်။
၂. ထီနန်းတော်တွင် တင်သွင်းပြသထားသော ထီနံပါတ်များသည် နိုင်ငံတော်မှတရားဝင် ရောင်းချခွင့်ပြုထားသော ထီနံပါတ်များဖြစ်ပါသည်။
၃. လူကြီးမင်းနှစ်သက်သော ထီနံပါတ်များအား ဝယ်ယူချိန်တွင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော ထီဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ကဲ့သို့ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စနစ်တကျဖြင့်ဝယ်ယူအားပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
၄. ထီလက်မှတ်သည် လူကြီးမင်းတို့ထံရောက်ရှိပြီးချိန်တွင် ထီလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် တခြားနောက်ပိုင်းပြဿနာများအားဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၅. လူကြီးမင်းတို့၏ရရှိသော ဆုငွေအပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
၆. ထီဆုရသော လက်မှတ်တွင် အက္ခရာတစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းမရှိ၊ ပိုင်းပြတ်စုတ်ပြတ်နေခြင်းနှင့် တခြားပြင်ရာ ဖျက်ရာ (သို့မဟုတ်) မူလအနေအထား ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမူတွေ့ရှိပါက ဆုငွေထုတ်ပေးခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိပါသည်။
၇. ထီလက်မှတ်ဝယ်ယူထားကြောင်းအချက်အလက်ရှိသော်လည်း ထီလက်မှတ်တင်ပြနိုင်မှသာလျှင် ဆုငွေရထိုက်သူဟု အသိအမှတ်ပြုပေးပါမည်။
၈. ဆုငွေရရှိသူ၊ ထီပေါက်သူသည် နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မူဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြစ်မူတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲညွှန်ကြာရေးမှူးကယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိလျှင် ဆုငွေထုတ်ပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပိုင်ခွင်ရှိသည်။
၉. အကယ်၍မိမိ၏ထီနန်းတော်အကောင့်အား ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုဖြင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ပါက လူကြီးမင်း၏အကောင့်အား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
Copyright © Lottery Palace Myanmar 2020, All Rights Reserved